အရေးတကြီး ဆွေးနွေးစရာ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေး နည်းဗျူဟာ « Softera Computer
အင်တာနက်ကြောင့် Digital Business Model ဒီဂျစ်တယ်စီးပွါးရေးမော်ဒယ်တွေနဲ့ လုပ်ငန်းသစ်တွေ အောင်မြင်စွာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Strategy is dead. ဆိုပြီးတော့ ပြောဆိုဆွေးနွေးလာကြတာတွေ ကို တွေ့ရတယ်။
တကယ်တော့ Strategy ဟာ သေဆုံးသွားတာတော့ မဟုတ်ပါ။ Strategy ဟာ အရင်ကထက် ပိုလို့တောင် အရေးကြီးလာတယ်။ ဆိုလိုတာက Traditional Strategy သမာရိုးကျ စီးပွါးရေး နည်းဗျူဟာ ဟာ အလုပ်မဖြစ်တော့ကြောင်း Digital Strategy ဒီဂျစ်တယ် စီးပွါးရေး နည်းဗျူဟာကို နားလည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုဆွေးနွေးလာကြတယ်။
Traditional Strategy မှာ Bruce Henderson က ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရာကို Focus ထားပြီး ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်နဲ့ အမြောက်အများထုတ်လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အကြံပြုတယ်။ Michale Porter က စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းရဲ့ အဆင့်ဆင့်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပြီး Transaction Cost စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် လျော့နည်းအောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ အကြံပြုတယ်။
Amazon ဟာ Traditional Strategy နဲ့ သွေဖယ်ပြီးတော့ အောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ Bruce Henderson အကြံပြုခဲ့သလို တနေရာထဲမှာ Focus ထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ရောင်းတယ်။ တဖက်မှာကလည်း ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဟာ ဆတိုးနူန်း Exponential Growth နဲ့ တိုးတက်နေတော့ ကုန်ကျစရိတ် Transaction Cost ဟာ လျော့နည်းလာတယ်။ Amazon လိုပဲ တခြား Tech ကုမ္ပဏီတွေလည်း Traditional Strategy နဲ့ သွေဖယ်ပြီး အောင်မြင်လာတယ်။
အဲ့ဒီမှာ Digital Strategy ဒီဂျစ်တယ် စီးပွါးရေး နည်းဗျူဟာ ဟာ အရေးတကြီး ဆွေးနွေးစရာ Topic ဖြစ်လာတယ်။
Posted by admin at 04:38:26 in Digital Economy
Addacomment (77 views)
အွန်လိုင်းစတိုး သို့မဟုတ် အီးကောမားစ်စတိုး တစ်ခုကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ကြမလဲ? »
« ဆတိုးနှုန်း နဲ့ တိုးတက်နေတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ